Rikoodh taariikhi ah oo sugaya Lionel Messi kulanka maanta ay Barcelona la ciyaareyso Valencia – Gool FM
(Barcelona) 25 Jan 2020. Indhaha Taageerayaasha kubadda cagta adduunka meel walba oo ay joogaan gaar ahaan kuwa Spain ayaa waxay caawa ku sii jeedaan kulanka uu marti galin doono garoonka Mestalla maanta oo Sabti ah kaasoo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Valencia iyo Barcelona.
Barcelona ayaa is keeni doonta garoonka Mestalla iyada oo dooneysa inay gacanta ku dhigto saddexda dhibcood, waxayna ka war qabtaa in kulanka ay la ciyaari doonto uu yahay mid aad u adag.
Halka kooxda marti galin doonto kulankan ee Valencia ay dooneyso in Barcelona ay guul kaga gaarto garoonkeeda Mestalla, afar maalmood kaddib guuldarradii 4-1 ahayed ay kala kulmeen Real Mallorca.
Haddab sida warbixintan lagu xusay kulanka maqaribka ku dhex mari doono kooxaha Valencia iyo Barcelona horyaalka La Liga ee dalka Spain wuxuu qaas u yahay kabtanka Barca ee Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa ciyaari doono kulankiisii 710-aad kaddib marka uu maqribka ka hor yimidaado Valencia, dhamaan tartamada kala duwan ee taariikhda xirfadiisa kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
Messi ayaa guul la gaaray kooxdiisa Barcelona 499 kulan, 709 kulan uu ka soo muuqaday, wuxuuna maanta baadi goob ugu jiraa kulanka ay la ciyaarayaan Valencia guushiisii 500-aad ee maaliyada Blaugrana ee ah dhamaan tartamada kala duwan.